Miisa 1.013 kosa ireo mpiadina voasoratra anarana ka ho an’ireo izay tsy tonga omaly maraina dia efa 0 ny naotiny ho an’ny taranja Malagasy raha araka ny fanazavan-dRavolamanana Lanto Herisoa, lehiben’ny foibem-panadinana na dia mbola afaka manohy ihany aza izy ireny. Nilamina ny fizotry ny fanadinana tamin’ny ankapobeny. Tonga ara-potoana ny laza adina raha araka ny fanazavana azo. Tsy nisy nanadino ny taratasy fiantsoana ihany koa ny mpiadina rehetra raha tsy nisy ihany koa ny narary. Nozaraina arotava avokoa ny mpiadina teo am-pidirana ho fiarovana amin’ny valan’aretina Covid 19 ankoatra ny fanosorana ny gel désinfectant. 12 taona no kely indrindra tamin’ireo mpiadina raha 21 taona no lehibe indrindra. Azo lazaina ho tsy nanana olana ny mpiadina tamin’ny ankapobeny ho an’ny taranja Malagasy omaly maraina, ankoatra ny famoronan-dahatsoratra izay maro no tsy nahavita hatramin’ny farany satria tapitra ny fe-potoana nomena . Mbola mijanona ho sarootra ho an’ny ankamaroan’ny mpiadina kosa ny taranja kajy na Mathématique , araka ny fanazavan’i Aina anisan’ireo mpiadina na dia efa maro aza ny famerenana vitany nandritra ny fihibohana. Ny ankoatra izay hoy izy tsy misy atahorana. Resaka valin-tanana moa no niompanan’ny laza adina Malagasy omaly maraina.